कसरी रोकिएला आत्महत्या? :: Setopati
कसरी रोकिएला आत्महत्या?
विवेक राई काठमाडौं, भदौं २४
नेपालमा आत्महत्याका घटना बढ्दो छ। प्रहरीको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा सरदर दैनिक १६ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्।
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार २०७१/७२ सालमा ४ हजार ३ सय ३२ जनाले आत्महत्या गरे। त्यसयता हरेक बर्ष आत्महत्या गर्नेको संख्या बढिरहेको छ। २०७२/७३ सालमा आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेर ४ हजार ६ सय ८० पुग्यो।
२०७३/७४ सालमा यो संख्या बढेर ५ हजार १ सय २४ पुग्यो। पछिल्लो प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार २०७४/७५ मा ५ हजार ३ सय १७ जनाले आत्महत्या गरे। तथ्याङ्क अनुसार आत्महत्या गर्नेमा १६ बर्षदेखि २३ बर्षसम्म उमेर समूहका ५० प्रतिशत भन्दा बढी छन्।
त्यस्तै २६ देखि ३५ उमेर समूहका युवा/युवतीले पनि धेरै आत्महत्या गर्ने गरेका छन्। सन् २०१७ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार एक लाख नेपाली मध्ये २५ जनाले आत्महत्या गरिरहेका छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै आत्महत्याका घटना तराईका जिल्लामा भएका छन्। सबैभन्दा धेरै कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया, बारा, पर्सा, सप्तरी, मोरङ र धनुषामा हुने गरेका छन्।
सेतोपाटीले विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको अवसरमा सर्वसाधारणलाई आत्महत्या कसरी रोकिएला भनेर सोधेको छ। हेर्नुहोस् भिडिओ रिपोर्टः